कुल बजार पूँजीकरणमा नबिल बैंकलाई नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले पछि पार्‍यो
मंसिर ४, काठमाडौं । कुल बजार पूँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा यो साता नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले ओगटेको छ ।
यस साता नबिल बैंकलाई पछि पार्दै फेरि पनि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी कुल बजार पूँजीकरणको सर्वाधिक हिस्सा ओगट्न सफल भएको हो । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सर्वाधिक हिस्सा ओगटेको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीलाई केहि समय नबिल बैंकले पछि पारेको थियो ।
यो साताको अन्तिम कारोबार दिन नबिल बैंकको कुल बजार पूँजीकरण रू. २ खर्ब १४ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ६० हजार रहेको छ भने नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको रू. २ अर्ब १५ खर्ब ७० लाख रहेको छ ।
धितोपत्र दोस्रो बजारमा नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको १५ करोड कित्ता र नबिल बैंकको १३ करोड ८४ लाख ४४ हजार ५१२ कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४३८ र नबिल बैंकको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ५४७ कायम भएको छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन नबिल बैंकको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ५५० रहेको थियो । यो साता नबिल बैंकको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३ ले घटेको हो ।
उता, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको शेयरमूल्य भने यो साता प्रतिकित्ता रू. ३१४ ले बढेको छ ।
गत साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार १२४ रहेको थियो । गत सातासम्म कुल बजार पूँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा नबिल बैंकलेनै ओगटेको थियो । यो साता नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीको शेयरमूल्य साताको तेस्रो र चौथो दिन सर्किट लेभलमा बढेको थियो ।